5 यूरोपमा सबैभन्दा आकर्षक पुरानो शहर केन्द्रहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5यूरोपमा सबैभन्दा आकर्षक पुरानो शहर केन्द्रहरू
युरोपमा आकर्षक पुरानो शहर केन्द्रहरू यूरोपको इतिहासको शक्तिको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो. विचित्र साना घरहरू, प्रभावशाली गिरजाघरहरु शहरको बीचमा, राम्ररी संरक्षित दरबारहरू, र केन्द्रीय वर्गहरु युरोपियन शहरहरूको जादूमा थप्नुहोस्. को5शताब्दीयौंदेखि युरोपमा धेरै आकर्षक पुरानो शहर केन्द्रहरू रहिरहेछन्.
रंगहरु, वास्तुकला, र किंवदन्तीहरु हरेक शहर मा बसोबास र खडा राख्नुहोस्. प्रागबाट कोल्मार, युरोपको पुरानो शहर केन्द्रहरू तपाईंको भ्रमणको लागि पूर्ण रूपमा लायक छन्, र कम्तिमा एक लामो सप्ताहन्त.
1. प्राग पुरानो शहर केन्द्र, चेक गणतन्त्र
प्रागमा आकर्षक पुरानो शहर केन्द्र उल्लेखनीय सुन्दर छ. शहरको केन्द्र वर्ग धेरै ठूलो छ, राम्रो bistros संग, क्याफे, र खाद्य बजार स्टालहरु. वर्ग मानिसहरू हेर्नका लागि उत्तम स्थान हो, चाख्नु चेक बियर, र खिरिएको ससेज खगोलीय घडी कार्यक्रमको लागि प्रतिक्षा गर्दा. पुरानो शहर केन्द्रको आकर्षण हो, को पाठ्यक्रम, खगोलीय टावर. त्यसोभए अचम्म नमान्नुहोस् जब तपाई पर्यटकको भीड हरेक चार घण्टा वर्गमा जम्मा भएको देख्नुहुन्छ.
प्रागमा आकर्षक पुरानो शहर केन्द्रको विशेष सुविधा सुन्दर रंगीन भवनहरू छन्. बारोक शैली चर्च St. निकोलस र टिन अघि हाम्रो लेडीको गथिक १ 14 औं शताब्दीको चर्च, हराउनु हुँदैन. प्राग मा पुरानो शहर केन्द्र पनि छ जहाँ क्रिसमस बजार हुन्छ, र आकर्षक शहर केन्द्र एक तेजस्वी कथा मा रूपान्तरण.
2. सल्जबर्ग, अस्ट्रिया
साल्जबर्गमा आकर्षक पुरानो शहर केन्द्र असाधारण र सुन्दर र अद्वितीय. इटालियन र जर्मन वास्तुकलाको मिश्रण, मध्य युग १ th औं शताब्दीका शैलीहरू, युरोपमा सब भन्दा मनमोहक शहर केन्द्रहरू सिर्जना गर्नुहोस्. सल्जबर्ग, Altstadt को रूपमा पनि चिनिन्छ यूनेस्को विश्व विरासत साइट र भियनाबाट अद्भुत दिन यात्रा, रेल पहुँच.
साल्जबर्गमा पुरानो शहर केन्द्रको मुटु राजकुमारको पुरानो घर हो, को रेसिडेन्ज राज्य 180 कोठा. रेसिडेन्ज स्क्वायर त्यो ठाउँ हो जहाँ तपाईं जाल्सबर्गको सुन्दर क्रिसमस बजारको मजा लिन सक्नुहुनेछ, र प्रत्यक्ष संगीत कन्सर्टहरू. पनि, पुरानो शहर केन्द्र वरिपरि घुम्न निश्चित गर्नुहोस्, रेसिडेन्जमा फोहरा, मोजार्टको बचपनको घर, र साल्जबर्ग क्याथेड्रल.
साल्जबर्ग शहर Alpe को उत्तर मा अवस्थित छ, स्पाइरहरूको साथ, र पृष्ठभूमिमा गुम्बजहरू. एउटा नदीले युरोपको सबैभन्दा राम्रो संरक्षित पुरानो शहरहरू मध्ये एकलाई पोष्ट गर्यो पोष्ट कार्ड दृश्यहरू थपेको.
3. Bruges पुरानो शहर केन्द्र, बेल्जियम
Bruge, वा हामी सबैलाई यो Bruges थाहा छ, एक आकर्षक पुरानो शहर केन्द्रको साथ अर्को अद्भुत शहर हो. एक पटक वाइकिsहरूको घर, आज यो छ युरोपको लुकेको रत्नहरू मध्ये एक. प्रयोग’ साँघुरो गल्ली र cobblestone सडकमा, रंगीन घरहरू, र नहरहरूले यसलाई युनेस्को विरासत साइट बनाउँदछ.
जब तपाईं ब्रुजमा पुरानो शहर केन्द्रको वरिपरि घुम्नुहुन्छ, तपाईंले सानो साना पसलहरू देख्नुहुनेछ जुन सुन्दर लेस प्रस्ताव गर्दछ. प्रयोग’ लेस विश्व भर मा प्रसिद्ध छ, त्यसैले राम्रो pics ल्याउन को अतिरिक्त, लेस एक अद्भुत स्मारिका हो जुन तपाईं ब्रुजबाट ल्याउन सक्नुहुनेछ.
ब्रुसेल्सबाट सार्वजनिक यातायातद्वारा ब्रुजहरू पहुँच योग्य छन्, र तपाईं शहर बाट गाडी अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ, पैदल, वा डुङ्गा सवारी. युगहरूमा यात्रा शुरू गर्न मार्कट एक उत्तम स्थान हो, र ब्रुजहरूको उल्लेखनीय बेलफ्रीमा जारी राख्नुहोस्, र चर्च अफ अवर लेडी ब्रुज. यदि तपाईं माथिबाट आकर्षक पुरानो शहर केन्द्रको प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसो भए बेलफ्री टावरले असाधारण दृश्य प्रस्तुत गर्दछ.
4. कोल्मार, फ्रान्स
कोल्मारको आकर्षक पुरानो शहर केन्द्र Alsace मा हेर्नको लागि एक मनमोहक स्थान हो. पुरानो शहर केन्द्र यूरोप मा सबैभन्दा संरक्षित पुरानो शहर केन्द्रहरु मध्ये एक हो. घरहरू’ facades मध्ययुगीन समय देखि आफ्नो पोस्टकार्ड जस्तै आकर्षण र सौन्दर्य सुरक्षित छ, र तपाईं प्रारम्भिक पुनर्जागरण तत्वहरू flamboyant आर्किटेक्चरमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ.
कोल्मर दाखबारीले घेरिएको छ, र चरित्र पुरानो शहर केन्द्रहरूमा, तपाईंले सुन्दर चर्च सेन्ट-मार्टिन पाउनुहुनेछ. याद नगर्नु पर्ने अर्को चीज भनेको कोल्मारमा रहेको सानो भेनिस हो, जहाँ तपाईं अत्यन्त साना रेस्टुरेन्टहरू भेट्टाउनुहुनेछ, पुल, र अन्वेषण गर्न नहरहरू.
त्यहाँ कोलमारको सानो शहरमा आवास विकल्पहरू छन्, तर तपाईं पनि कोल्मारमा पुरानो शहर केन्द्र मजा लिन सक्नुहुन्छ, Strasburg बाट एक दिन यात्रा मा. अद्भुत दाखबारीहरू फ्रेन्चका लागि उत्तम बहाना हुन् शहर ब्रेक र सप्तान्तमा जानु.
पेरिसदेखि कोल्मार ट्रेन मूल्यहरू
ज्यूरिखदेखि कोल्मर ट्रेन मूल्यहरू
स्टटगार्ट to कोल्मर ट्रेन मूल्यहरु
5. फ्लोरेन्स ओल्ड सिटी सेन्टर, इटाली
फ्लोरेन्सको डुमो, यसको टावर र क्याथेड्रलको साथ, फ्लोरेन्समा आकर्षण मा पुरानो शहर केन्द्र शासन, भव्यता, र सौन्दर्य. फ्लोरेन्स मा पुरानो शहर केन्द्र एक हो5सबैभन्दा आकर्षक र युरोप मा उल्लेखनीय सुन्दर. यो युनेस्को विश्व सम्पदा साइटमा तपाइँको सुरूवात बिन्दु पियाजा डेल डुओमोबाट प्याजा डेला सिग्नोरिया शुरू हुन्छ.
यदि तपाईं फ्लोरेन्सको अधिक पत्ता लगाउन उत्सुक हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले Uffizi ग्यालेरी र Boboli बगैचामा जारी राख्न पर्छ. शताब्दीयौंको दौडान शहरको इतिहास र संस्कृतिको बारेमा कलाको माध्यमबाट सिक्ने अरू कुनै उत्तम तरिका छैन. फ्लोरेन्स एक अद्भुत इटालियन शहर हो, जहाँ तपाईं एक Panini हडप्न सक्नुहुन्छ, सही डुओमो बाहिर. यदि तपाईंसँग समय छ, त्यसपछि डुओमोको शीर्षमा चढ्नुहोस्, लागि लुभावनी दृश्य इटालीको सबैभन्दा सुन्दर शहर मध्ये एक.
फ्लोरेन्सको पुरानो शहर केन्द्र हो भेनिसबाट दिन यात्रा. तथापि, तपाईंले कम्तिमा समर्पण गर्नुपर्छ2पूर्ण दिन साइटहरू र फ्लोरेन्सको रत्नहरू अन्वेषण गर्न.
यदि तपाईं समय मा मध्ययुगीन युग र पुनर्जागरण को लागि यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसो भए5यूरोप मा पुरानो शहर केन्द्रहरु आदर्श यात्रा कार्यक्रम हो. यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी ट्रेनको माध्यमबाट यी सब भन्दा आकर्षक पुरानो शहर केन्द्रहरूमा तपाईंको यात्राको योजना बनाउन सहयोग गर्न हामी खुशी हुनेछौं.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा Most सब भन्दा आकर्षक पुरानो शहर केन्द्रहरू" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-old-city-centers-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
सिटीसेन्टर फेरीटाईलटाउन ओल्डसिटीसेन्टर OldcitycentersEurope रेल यात्रा ट्राभल कलमर ट्रैवलफ्लोरेन्स ट्राभल प्याराग ट्राभेलसाल्जबर्ग